တပ်မှုးတပ်သားပြောစကား အပိုင်း(၁) ဗိုလ်ကြီးဟောင်း ခင်မောင်ညွန့်....
VOA တွေဆုံမေးမြန်းခန်း အသံဖိုင်
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Saturday, April 24, 2010
ယတြာတွေချေပြီး မန်းမှုတ်နေပြီ .....
ပြီးခဲ့တဲ့ မြန်မာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့က စစ်အစိုးရရဲ့ ကြပ်ပြေးနေပြည်တော်မှာ ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ လှည့်လည်ပြီး နှစ်သစ်ကူး အန္တရာယ်ကင်း ပရိတ်ရေ ပက်ဖြန်းခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ မဟုတ်ပဲ ကြပ်ပြေးနေပြည်တော် တစ်ခုတည်းကိုသာ ကွက်ပြီးပြုလုပ်ခြင်းဟာ မြန်မာပြည်သူ၊ ပြည်သားတွေအတွက် အင်မတန်မှ ခံပြင်းစရာ ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ပြည်တွင်းက ဝေဒပညာရှင် တစ်ဦးမှ ပြောကြားခဲ့ပြီး ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲ လုပ်လုပ် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ စေတနာ မမှန်တာရယ်၊ မိမိနေရာဋ္ဌာန တစ်ခုတည်းကိုသာ ကြည့်ရှုတတ်ပြီး ဘယ်သူတေတေ ငတေမှာ ပြီးရောဆိုတဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ အကျိုးပေးမှု ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုသွားပြီး လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကို သုံးသပ်တင်ပြသွားပါတယ်။
" ဒီနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့က ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ ပရိတ်ရွတ်သွားတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြည်သူတွေကတော့ တော်တော်ပြောဆိုကြတာပေါ့... တကယ်တန်း ပြည်သူတွေအတွက် တနိုင်ငံလုံးအတွက် မလုပ်ပဲ အာဏာရှင်ဆန်ဆန် အတ္တဆန်ဆန် လုပ်သွားတာဟာ ရည်ရွယ်ချက် စေတနာတော်တော် ညံ့ဖျင်းနေပါတယ်။ ဒီအစိုးရဟာ ၂၀၁၀ကိုတော်တော်လေးလန့်နေပြီလေ။ ၂၀၁၀ နှစ်စမှာ နေကြတ်သွားတာ နောက် သင်္ကြန်အကြတ်နေ့က ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွေ နောက်...သူတို့နေပြည်တော် ဆိုတာ မူလနေရာက ကြပ်ပြေးလေ ကြပ်ရင်ပြေးရမယ် ဆိုတဲ့ပညတ်တွေ ပါနေတယ်။ ပညတ်သွားရာ ဓာတ်သတ်ပါဆိုသလိုပေါ့။ နေကြတ်သွားတာ ၂၀၁၀ခုနှစ် ၁လပိုင်း ၁၅ရက်နေ့ နောက်သင်္ကြန်အကြတ်နေ့က ဗုံးပေါက်တာ ကလည်း ၄လပိုင်း ၁၅ရက်နေ့ လေ့လာကြည့်ပေါ့။ နေကြတ်တာ တခါတခါမှ ဖြစ်တတ်လို့ နှစ်လရက် ပေါင်းကြည့် ၁၀ရတယ်။ သင်္ကြန်က နှစ်စဉ်ရှိတယ် ဆိုတော့ ၄လနဲ့ ၁၅ရက်ပေါင်းကြည့် ၁၀ပဲရတယ်။ ၂၀၁၀မှာ နေကြတ်သွားကတည်းက သူတို့ခေါင်းကိုက်နေတာ ... ။
ဒီတော့ နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲဆိုသူရဲ့ နာမည်ကလည်း ပေါင်းကြည့်ပါ။ (သန်း ၆၊ ရွှေ ၄=၁၀) ရဟန်း(၆+၄) ရဟတ်(၆+၄) ဝေဟင်(၆+၄) နေပြည်တော်(၇+၅+၇=၁၉) ၁၀တွေရနေတယ်။ ဒါကြောင့်နေပြည်တော်မှာ ရဟန်း၊သံဃာတွေကို ပင့်ပြီးယတြာချေသွားတယ်လို့ မြင်တယ်။ ဆရာ့လိုပဲ ဒီကဝေဒပညာရှင်တွေလည်း သိနေကြတယ်။ နောက် ၉ဂဏန်း နာမည်ကိုရရှိထားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (၁+၃+၃+၂)ရဲ့ မွေးဂဏန်း ၁၉ရက်နေ့ကလည်း ၁၀ဆိုတော့ ဒီအတွက် ရအောင် ယတြာတွေ ချေနေတာလေ။ နောက်သူတို့ရဲ နေပြည်တော်ဆိုတဲ့နာမည်မှာ စနေနံနှစ်ခုကြားမှာ ကြာသာပတေး ရောက်နေတာ ဓမ္မာသောက၊ အင်းဝရာဇာ ဆိုတဲ့အတိုင်း နာမည်ကရန်ဖက် ကျနေတယ်။ ဒီနှစ်သင်္ကြန်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဆရာပြောထားဘူးပါတယ်။ ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ပဲလုပ်လုပ် အာကာသထဲမှာ လွန်းပျံယာဉ်နဲ့ပဲလုပ်လုပ်.. ယတြာချေတာ ကောင်းကျိုးလိုအင် ဆန္ဒအတွက်ဆို အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာ.. အခုဟာက မိမိအကျိုးတစ်ခုအတွက်ပဲ ကြည့်ပြီး တိုင်းသူပြည်သားတွေ ကောင်းရာကောင်းကျိုးအတွက် မလုပ်ပဲ အတ္တကြီးပြီး ကိုယ်နဲ့ကိုယ်အပေါင်းအပါ အကျိုးတခုအတွက်ပဲ ကြည့်ပြီးလုပ်တဲ့ အလုပ်ဟာ စေတနာနဲ့ ရည်ရွယ်ချက် မမှန်လေတော့ ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးကများနေပြီ။ ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ အကောင်းထက် အဆိုးတွေများနေတဲ့ နှစ် ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်နှစ်လို့ပဲ ဆရာပြောချင်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေ အနေနဲ့က တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မေတ္တာတရားထားကြပါ.. ညီညွတ်ကြပါလို့ ဆရာပြောချင်ပါတယ်"...ဟု ပြောဆိုသွားပါတယ်။
ပြည်တွင်းက နာမည်ကြီး ဝေဒပညာရှင် တစ်ဦး ပြောဆိုသွားတာပါ.. ကဗျာဆရာ ကိုကောင်းကင်ကိုရဲ့ အငိုဒုက္ခတိုင်းပြည် ကဗျာထဲက စာသားလေးနှစ်ကြောင်းလို ယတြာတွေချေပြီး မန်းမှုတ်နေပြီ ဖြုတ်ဦးနှောက်တွေ အရမ်း... လုပ်နေပြီ ဆိုတာလိုပါပဲ။ လူတိုင်းကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ စေတနာ အကောင်း၊ အဆိုးဟာ ကိုယ့်ဆီပြန်လာစမြဲပဲ ဖြစ်ချင်တန်တဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး မာန်တတ်လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်ခဲ့ကြပြီး ပျက်ချိန်တန်ရောက်မှ ပျက်မှာကို ကြောက်ရွံပြီး မိုးကြိုးပစ် ထန်းလျက်နဲ့ကာဖို့ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
အောက်မှာ ကြပ်ပြေးနေပြည်တော်ဝန်းကျင် ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
စေတနာ ကောင်းမကောင်း ကြပ်ပြေးမှာတော့ ထိန်ထိန်ညီးတဲ့ လျှပ်စစ်မီး၊ ပြည်သူတွေမှာတော့ မှိန်မှိန်ငြီးငွေ့နေရတဲ့ ဖယောင်းတိုင်မီး၊
နအဖ ကအေးချမ်းသာယာပြီး ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် နိုင်ငံတော်ကြီးပေါ်ထွန်းရေး ဆိုပြီး မီးသတိပေးနှိုးဆော်ချက်မှာလျှပ်စစ်မီးနဲ့ပါတ်သက်ပြီး တလုံးမှမပါ
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, April 24, 2010
မင်းသားဒွေး အဖေ ဦးတင်ထွန်းမောင်ကလဲ မတရားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပါတီထောင်ပြီးပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ပါအုံးမယ်တဲ့
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, April 23, 2010
ဧပြီလ(၁ရ)ရက်နေ့မှစပြီးနေပြည်တော်၌ စစ်တပ်အဆင့်မြင့် အရာရှိများ သွားလာခွင့် ကန့်သတ်
စစ်အစိုးရ မြို့တော်သစ် နေပြည်တော်တွင် ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ ကုန်ပိုင်းက တွေ့ရသော ဆောက်လုပ်နေဆဲ လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ (ဓာတ်ပုံ - Reuters)
နေပြည်တော် စစ်ဌာနချုပ် နယ်မြေနှင့် ဆက်စပ်နယ်မြေ အတွင်း ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီ ၁၇ ရက်နေ့က စတင်၍ လုံခြုံ ရေး တိုးမြှင့်ထားပြီး စစ်တပ် အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများ၏ နေပြည်တော်သို့ လာရောက်သည့် ခရီးစဉ်များ ကန့်သတ် ထားကြောင်း သိရသည်။
ကန့်သတ်မှုမှာ တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်များ၏ တိုင်းမှူးအဆင့် ဗိုလ်ချုပ်များနှင့် တပ်မမှူး အဆင့်ရှိ ဗိုလ်မှူးချုပ်များ၏ ခရီးစဉ်များဖြစ်ကြောင်း နေပြည်တော် စစ်ဌာနချုပ်မှ လာသော သတင်းများက ဆိုသည်။
ယင်းတိုင်းမှူးနှင့် တပ်မမှူးအဆင့်ရှိ အရာရှိကြီးများနေဖြင့် နေပြည်တော်သို့ လာရောက်မည့် အကြောင်းကို ကြိုတင် သတင်း ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပြီး သွားရောက်တွေ့ဆုံမည့် အရာရှိကြီးများ၏ ခွင့်ပြုချက်လည်း လိုအပ် သည်ဟု တပ်မတော် စစ်ရုံးချုပ် ရုံးစိုက်ရာ နေပြည်တော်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်မှ အရှာရှိတဦးက ပြောဆိုသည်။
“ဧပြီ ၁၇ ရက်နေ့က ကက(ကြည်း)ကနေ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့ တပ်မဌာနချုပ်တွေကို ညွှန်ကြားချက်ပို့ထားပါ တယ်၊ ဘယ်တိုင်းမှူး ဘယ်တပ်မမှူးမှ ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ စစ်ရုံးချုပ်ရှိတဲ့ နေပြည်တော်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်ကို လာစရာ မလိုဘူးလို့ ညွှန်ကြားထားတယ်”ဟု ၎င်းက ဧရာဝတီ သို့ ပြောသည်။
နေပြည်တော်သို့ လာရောက်သည့် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်များနှင့် တပ်မမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်များ၏ တည်းခိုရာနေရာကို လည်း ကြိုတင် သတင်းပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပြီး ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန စစ်ရုံးချုပ်ရှိ ကက(ကြည်း)၏ ညွှန်ကြား ချက် ရရှိမှ တည်းခိုနေထိုင်ရမည်ဖြစ်သည်ဟုလည်း ယင်းစစ်ဌာနချုပ် အရာရှိက ပြောဆိုသည်။
တိုင်းမှူးနှင့် တပ်မမှူးများ၏ နေပြည်တော်ခရီးစဉ်အတွင်း လုံခြုံရေးအရ လိုက်ပါမည့်သူများနှင့် ရုံးအဖွဲ့ကို လည်း ခရီးစဉ်မတိုင်ခင် ၄ ရက်ခန့် ကြိုတင်သတင်းပို့ပေးရန်နှင့် ခွင့်ပြုချက်ရပြီးမှ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရ မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“အဓိက ကတော့ လက်နက်ခဲယမ်း ယူဆောင်လာတာကို ကန့်သတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်၊ ကက(ကြည်း)က အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် နေပြည်တော်ကို လာရောက်မယ့် အရာရှိတွေရဲ့ လက်နက်ခဲယမ်းများ ယူဆောင်တာကို နဂို ကထက် တင်းကျပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်”ဟု အထက်ပါ အရာရှိက ဆက်ပြောသည်။
အဆိုပါ ကက(ကြည်း)၏ တိုင်းမှူး၊ တပ်မမှူးများကို နေပြည်တော်သို့ ခရီးသွားလာခွင့် ကန့်သတ်ခြင်းနှင့် လုံခြုံရေး အတွက် အတူပါလာသည့် အရာရှိများ၏ လက်နက်ခဲယမ်းများ ကန့်သတ်ခြင်းသည် စစ်ရုံးအတွင်း ပစ်ခတ်မှုများ ဖြစ်လာမည်ကို စိုးရိမ်မှုကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဘက်လေ့လာသူများက သုံးသပ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလ ၁၅ ရက်နေ့(သင်္ကြန် အကြတ်နေ့)က ရန်ကုန်မြို့ မင်္ဂလာ တောင်ညွန့်မြို့နယ် ကန်တော် ကြီး အနီးရှိ X2O ရေကစား မဏ္ဍပ်ရှေ့တွင် ဗုံးသုံးလုံး ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်း အမှတ်(၄) စစ်ဒေသ မှူး ဗိုလ်မှူးကြီး အုံးချိုနှင့် မြို့နယ်အဆင့် အရာရှိများအပါအ၀င် လူ ၁၇၀ ဒဏ်ရာရရှိပြီး အငြိမ်းစား ဗိုလ်ကြီး တဦးဖြစ်သည့် မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသန့်စင်သိမ်း အပါအ၀င် ယနေ့ အထိ ၁၀ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့က အပတ်စဉ်ထုတ် ဂျာနယ်များတွင် ဖေါ်ပြသည်။
ယင်းဧပြီ ၁၅ ရက်နေ့ တရက်တည်းတွင်ပင် နေပြည်တော်ရှိ Asia World ကုမ္ပဏီပိုင် မြတ်တော်ဝင် ဟိုတယ် တွင်လည်း ဗုံးတွေ့ရှိကြောင်း ဟိုတယ် တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။
X2O ရေကစားမဏ္ဍပ်တွင်ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ကြောင့်ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရခဲ့သောအမှတ် (၄) စစ်ဒေသမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး အုန်းချိုသေဆုံးသွားပါပြီး
ရန်ကုန်မြို့ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ကန်တော်ကြီး ကန်ပတ်လမ်းရှိ X2O ရေကစား မဏ္ဍပ် ရှေ့၌ သင်္ကြန် အကြတ်နေ့ ဧပြီ (၁၅)ရက်၊ မွန်းလွဲ ၃ နာရီ ခန့်တွင် ဗုံးသုံးလုံး ဆက်တိုက် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွား ခဲ့မှုကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် ၊ အမှတ် (၄)စစ်ဒေသမှူး ၊ ဗိုလ်မှူးကြီး အုန်းချို သည် မျက်နှာ နှင့် ၀မ်းဗိုက် တို့တွင် ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပြီး စိုးရိမ်ရသော အခြေ အနေတွင် ရှိကြောင်း အမှတ် (၁) တပ်မတော် ဆေးရုံကြီး ၊ ကုတင် (၁၀၀၀) မှ အမည် မဖော်လိုသူ အရာရှိကြီး တစ်ဦး ထံမှ စုံစမ်း သိရှိ ရပါသည်။
အမှတ် (၁) တမ်မတော် ဆေးရုံကြီး ၊ ကုတင် (၁၀၀၀) မှ တာဝန်ကျ အရာရှိ တစ်ဦးကတော့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားပြီး အမှတ် (၄) စစ်ဒေသမှူး ၊ ဗိုလ်မှူးကြီး အုန်ချို ဆေးရုံကို ရောက်ရှိလာပုံကို အခုလို ပြောပြ ပါတယ် ။ မွန်းလွဲ ၃ နာရီ ၃၀ လောက်မှာ ဗိုလ်မှူးကြီး အုန်းချို ကျွန်တော်တို့ တပ်မတော် ဆေးရုံကြီး ကုတင် (၁၀၀၀) ကို ဒဏ်ရာ တွေနဲ့ ရောက်လာ ပါတယ် ၊ ဗိုလ်မှူးကြီး အုန်းချိုကို ခွဲစိတ်ပါရဂူကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး အုန်းမောင်မောင်နဲ့ အကူ အရာရှိတွေ အချိန် (၃)နာရီကြာ ခက်ခက် ခဲခဲ ဗုံးစတွေကို ခွဲထုတ် ရပါတယ် ။
မျက်နှာမှာ ကတော့ ဒဏ်ရာ သိပ်မပြင်းပါဘူး ၊ ဒဏ်ရာပြင်းတာက ၀မ်းဗိုက်မှာပါ ၊ အသဲ နဲ့ အူမကြီးကို ဗုံးစတွေ တော်တော် ထိသွားပါတယ် ၊ အခု ဗိုလ်မှူးကြီး အုန်းချိုကို ကျွန်တော်တို့ အမှတ် (၁) တပ်မတော် ဆေးရုံကြီး ကုတင် (၁၀၀၀) အထူး ကြပ်မတ်ဆောင်မှာ ထားပါတယ်။ ကျွန်တော် သိရ သလောက်တော့ အခြေအနေက မကောင်း ဘူးလို့ သိရ ပါတယ်။
၎င်းသတင်း၏နောက်ဆက်တွဲကိုတော့ ယနေ့တွင်(DVB)သတင်းဌာန မှ ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရခဲ့သော အမှတ်(၄) စစ်ဒေသမှူး၊ဗိုလ်မှူးကြီးအုန်းချိုသည် ၊ နှစ်ဆန်းတရက်နေ့တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည့် ဟု(DVB)ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းမှ သတင်းဖော်ပြပြောဆိုသွားပါသည်.။
ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်၂၃ လမ်းတွင် လေးထပ်တိုက်ငြမ်းပြိုကျမှု ဖြစ်ပွား
ရန်ကုန် မြို့ လသာ မြို့ နယ် ၂၃ လမ်း တွင် ယနေ့ မနက် ၁၁ နာရီခန့် က လေးထပ်တိုက်တစ်လုံးပြိုကျမှု
ဖြစ်ပွားခဲ့သည် ဟု သတင်းရရှိသည်။(သတင်းအပြည့်အစုံအားမကြာခင်ဖော်ပြပေးသွားပါမည်)။
ရန်ကုန် မြို့ လသာ မြို့ နယ် ၂၃ လမ်း အထက်ဘလောက် အိမ်အမှတ် ၁၁၆ – ၁၂၀ တွင် ယနေ့ မနက် ၁၁
နာရီခန့် ကဆောက်လုပ်ဆဲ လေးထပ်တိုက်တစ်လုံး၏ ငြမ်း ပြို ကျမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည် ဟု သတင်းရရှိသည်။
ငြမ်းပြိုကျမှု ကြောင့်တန်ဖိုးကြီး လန်ခရူဆာ ကား တစ်စီး ပျက်စီးသွားပြီး ၊အလုပ်သမား တစ်ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိသွားသည် ဟု သိရသည်။
ဆောက်လက်စ RC တိုင်ငြမ်းမှ တစ်ဆင့် ပြိုကျရာ ၀ုန်းခနဲ အသံကြောင့်လမ်းသူ လမ်းသား များ နှင့် ပလတ်စတစ်အိတ် နှင့် ကွာစေ့ လက်ကားရောင်းသူ များ မှာဗုံးပေါက်သည် ထင်ပြီး ကြောက်လန့် ၍ ပြေးကြသည် ။
သင်္ကြန်ဗုံးပေါက်ကွဲမှု အဓိကတာဝန်ရှိသူ နအဖစစ်အစိုးရ ဟု ဆိုနေကြ
ဧပြီ (၁၅) ရက် (သင်္ကြန်အကြတ်နေ့)၊ ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်း X20 မဏ္ဍပ်ရှေ့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွင် အဓိကတာဝန်ရှိသူမှာ နအဖသာလျှင်ဖြစ်ကြောင်း မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူတို့က ဝေဖန်ပြောဆိုကြသည်။
ထိုနေ့က သေဆုံးသူ (၈) ဦးတွင် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်မှ (၅) ဦး ပါဝင်ပြီး ဒဏ်ရာရရှိသူများ၏ ထက်ဝက်ခန့်မှာ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တခုတည်းမှ ဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်သည် အရှေ့ပိုင်းခရိုင် စစ်ဒေသမှူး၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိသော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်း၏ စီစဉ်ညွှန်ကြားမှုဖြင့် တောင်ပိုင်းခရိုင် အမှတ် (၄) စစ်ဒေသမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး အုန်းချိုက လာရောက် တွဲဖက်လုပ်ဆောင်ရကြောင်း သိရသည်။
“စစ်ဒေသမှူးမှာ သား (၁) ယောက်၊ သမီး (၂) ယောက်ရှိတယ်။ သူက ဗုံးပေါက်ကွဲမယ့်သတင်း ကြိုရထားပုံရတယ်။ ကလေးတွေကို သင်္ကြန်တွင်း ဘယ်မှ ထွက်မလည်ကြဖို့ သူ့ဇနီးကို မှာတယ်” ဟူသော သတင်းစကားများ စစ်ဒေသမှူးနေထိုင်ရာ ဝေဠုဝန်အိမ်ရာတွင် ပျံ့နှံ့နေသည်။
စစ်ဒေသမှူးသည် အကြိုနေ့ကတည်းက X20 မဏ္ဍပ်လုံခြုံရေးကို အနီးကပ် ကြီးကြပ်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု မျက်မြင်များက ပြောသည်။
“ဗိုလ်မှူးကြီးက ဗိုက်ကို လက်နဲ့ဖိပြီး အဘရေ ကျနော်တော့ ထိသွားပြီလို့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်းဆီ သတင်းပို့လိုက်သေးတယ်” ဟု ထိုစဉ်က အနီးရှိ ရဲဘော်တဦးက ပြောပြသည်။
ထို့ပြင် သင်္ကြန်ကာလနှင့် ဆီလျော်မှုမရှိသော လူနာတင်ကား အသင့်ထားရှိခြင်း၊ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အတွင်းလူနာဆောင်အား ဖယ်ရှားရှင်းလင်းထားခြင်းတို့အပေါ် သံသယ၀င်ကာ နအဖ၏လုပ်ရပ်ဟု အများက ထင်မြင်ချက်ပေးနေကြသည်။
ယနေ့အထိ သေဆုံးသူစုစုပေါင်း (၁၈) ဦးရှိနေပြီဟု ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှ သတင်းများထွက်ပေါ်နေသော်လည်း အတည်ပြုချက် မရသေးပေ။
ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ပေမဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဌာနချုပ်ရုံး ပိတ်ဖို့မရှိ
NLD အနေနဲ့ မေလ ၇ ရက်ကျော်လို့ ဥပဒေအရ အလိုအလျောက် ပါတီပျက်ပြယ်ချိန်မှာ ရှိထားတဲ့ အစုအဖွဲ့တွေနဲ့ လူထုအကျိုးပြုလုပ်ငန်း၊ လူမှုကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်သွားမယ်လို့ ဆိုသလို တဘက်မှာလည်း နိုင်ငံရေးအရ ဆက်ရှိနေဦးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအစုအဖွဲ့တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးအရ ဘယ်လို ရပ်တည်လှုပ်ရှားမလဲ ဆိုတဲ့ အစီအစဉ် အသေးစိတ် အတိအကျကိုတော့ ပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်း ကြားမှာ သဘောထား ကျထားပုံ မရသေးပါဘူး။
ရွှေတိဂုံစေတီပေါ်သို့ အေးချမ်းစွာ ဘုရားဖူးလာကြသော ပြည်သူများပါမချန် နအဖလုံခြုံရေးများက ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများကို သဲသဲမဲမဲ ရှာဖွေလျက်ရှိ။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, April 22, 2010
ယောနယ်တွင် နွေရာသီသွားလာရေးအတွက် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ၀ါးတံတားလေးများကို အားကိုးသွားရ
ပွင့်လင်းရာသီရောက် ချိန်တွင် ယောနယ်၌ သွားရေးလာရေး အဆင်ပြေစေရန် ချောင်းကူး၊ မြစ်ကူးဝါး တံတားလေးများဖြင့် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြု လုပ်ကာ သွားလာနေရကြောင်း သိရသည်။
၀ါးတံတားလေးများကို တစ်ရွာ နှင့်တစ်ရွာကူးလူးသွားလာရာ၌လည်း ကောင်း၊ တောတောင်များအတွင်းရှိ လယ် ယာတောများသို့ သွားလာရာ၌လည်းကောင်း လွယ်ကူစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ရန် ဆောက် လုပ်ထားကြခြင်းဖြစ်သည်။
၀ါးတံတားလေးများမှာ ချောင်း ရေ၊ မြစ်ရေကျလာသည့်အခါ ရေထဲတွင် ငုတ်စိုက်၍ အပေါ်က ၀ါးတန်း၊ ၀ါးကပ် ခင်းကာ တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ချောင်း၊ မြစ်များတွင် ဖြတ်ကူး ရသော ၀ါးတံတားကြီးများကို ရွာသူရွာသား တို့၏ လုပ်အားဒါနအဖြစ် စုပေါင်းတည် ဆောက်ကြပြီး ယာခင်းသွား ချောင်းငယ် မြောင်းငယ်များတွင် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ဆောက်လုပ်ကြသည်။
၀ါးတံတားလေးများမှာ နှစ်စဉ် ရေကျချိန်ရောက်တိုင်း ပေါ်လာကြပြီး မိုး ဦးကျတောင်ကျရေများ ပြည့်လျှံပါက မျော ပါသွားလေ့ရှိသည်။
ထိုအခါ နောက်နှစ်ပွင့်လင်း ရာသီရောက်သည့်အခါ ပြန်လည်အသစ် တည်ဆောက်ကြရသည်။ ဤသို့ဖြင့် ယော နယ်ရှိ ၀ါးတံတားလေးများမှာ ပွင့်လင်းရာသီ၌ ပေါ်လာသော ယောနယ်၏ အလှတရား တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ယောသူယောသားတို့ က မှတ်ယူအသုံးပြုနေကြဆဲဖြစ်သည်။
ရွှေဘိုအောင်မြေ၀င်း မန်ကျည်းပင်စည်မှ စေတီပုံနှင့်ထူးခြားပုံများ တွေ့ရ
ရွှေဘိုမြို့အ၀င် အောင် မြေဘုရားဝင်းအတွင်း၌ အောင်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော အောင်မြေဗိမာန်၏ မြောက်ဘက်တွင် အသစ်တည်ထားမည့် အောင်မြေဗောဓိစေတီနှင့် သတ္တဌာနမြေ နေရာကို ဖေဖော်ဝါရီ ၈ရက်က သြ၀ါဒါ စရိယဆရာတော်ကြီးများ သွားရောက် ကြည့်ရှုရာ ခုတ်လှဲရှင်းလင်းထားသော မန် ကျည်းပင်တစ်ပင် ပင်စည်မှ စေတီပုံနှင့် ထူးခြားပုံများကို တွေ့ရှိရကြောင်း သိရ သည်။
"မန်ကျည်းပင်ကို ခုတ်လှဲရှင်း လင်းတာ မန်ကျည်းပင်တစ်ပင်ရဲ့ အနှစ်က စေတီပုံ၊ ဗောဓိညောင်နဲ့စေတီပုံ၊ စင်္ကြံ လျှောက်ပုံ၊ ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်နေပုံထူးခြားစွာ တွေ့ရတာပဲ။ အောင်မြေနေရာက ကျေးဇူး တော်ရှင် ဝေဘူဆရာတော်ကြီးသီတင်းသုံး ခဲ့ဖူးတယ်။ အခု မန်ကျည်းပင်မှာ တွေ့ရ တဲ့ပုံနဲ့ ဆရာတော်ကြီး ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ပုံ၊ စင်္ကြံလျှောက်ပုံ တူတယ်ဆိုပြီး ဓာတ်ပုံနဲ့ တကွ တွဲပြထားတယ်။ ဘုရားဖူးလာသူတွေ အောင်မြေနင်းသူတွေ ပူဇော်ကြည့်ရှုနိုင် အောင် အောင်မြေဘုရားဂေါပကအဖွဲ့က အောင်မြေဂန္ဓကုဋိတိုက်မှာ ပြသထားတယ်" ဟု အောင်မြေဘုရား ဂေါပကအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦးက ပြောသည်။
စေတီပုံနှင့်ထူးခြားပုံများဖြစ်ပေါ် နေသော မန်ကျည်းပင်မှာ အခြေနှစ်ထွာ ရှိပြီး အမြင့် ၁၂ တောင်ရှိသည်။ အခြေမှ နှစ်ထွာရှိနေရာတွင် လွှဖြင့်ဖြတ်လှဲရာထူး ခြားပုံများ တွေ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ အောင်မြေ ဂေါပကအဖွဲ့မှ အောင်မြေဗောဓိစေတီကို ဗုဒ္ဓဂယာပုံစံတူစေတီတော်တစ်ဆူကို စတင် ဆောက်လုပ်ရန် ပန္နက်ရိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပဋိပက္ခတွေကြောင့်ထွတ်ပြေးတိတ်ရှောင်းနေကြသော ဒုက္ခသည် ကလေး(၅)ဦး အနက်ကလေးတဦးသေဆုံး(ရုပ်သံသတင်း)
ဧပြီ(၂၀) ရက်နေ့ မူဆယ် တွင်လေပြင်းမုန်းတိုင်းတိုက်ခတ် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုများပြား
တရုတ် - မြန်မာနယ်စပ် မူစယ်ခရိုင်အတွင်းပါဝင်သော မူစယ် မန့်ဟျှိုး (မန့်ဟီးရိုးမြို့)နယ်ခွဲ နှင့် ၁၀၅ မိုင်ကုန်သွယ် ရေးဇုန်တွင် အိမ်အမိုးများလွင့်စင်သွားခြင်း အိမ်ဝန်းထရံများပြိုလဲခြင်း သစ်ပင်များကျိုးကျ ခြင်းများနေရာအနှံ့ဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများက သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ပြောသည်။
လေပြင်းတိုက်ခိုက်ချိန် ၁၀ မိနစ်နီးပါးခန့်အတွင်း မူစယ်မြို့တွင် ပျက်ဆီးမှုအထူးများပြားပြီး လျှပ်စစ်မီးလှိုင်း များ ယနေ့အထိ ပြတ်တောက်လျှက်ရှိကြောင်း မူစယ်မြို့ခံ တစ်ဦးက ပြောသည်။
“မူဆယ်မှာ အိမ်အမိုးလှန်တယ် စည်ပင်တန်းလျားတစ်ခုလုံး ပြိုသွားတယ် သစ်ပင်တွေတော့ တော်တော် ကျိုးသွားတာ ပေါ့ဗျာ တစ်ဝက်လောက်ကနေ ဟက်တက်တွေကျိုးကုန်တယ် မိုတယ်ရှေ့က ပိန္နဲပင်ကျောင်း နား ကအပင်တွေ ဂေါက်ကွင်း နားက အပင်တွေ ကာစတန်ရုံးနားက အပင်တွေ တော်တော်များများပါပဲ ” ဟု သူက ပြောသည်။
မူစယ်မြို့ပေါ်ရှိ ဟိုမွန်၊ ခရစ်ယာန် နှင့်တောင်ရပ်ကွက် တို့တွင် ထိခိုက်ပျက်ဆီးမှု ပိုများပြီး (၁၀၅) မိုင်ကုန် သွယ်ရေးဇုန် အတွင်း၌ ကုန်သွယ်ရေး ရုံးခန်းအဆောက်အဦး မှန်ချပ်များကွဲသွားကြောင်း သိရသည်။
မန့်ဟျှိုးမြို့နယ်ခွဲတွင် အိမ်ပြိုလဲမှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများရှိသည်ဟု ဒေသခံများကဆိုသော်လည်း သီးခြား အတည်ပြုချက်မရရှိသေးပေ။
တရုတ်နယ်စပ် မူစယ်တစ်ဘက်ကမ်း ကျယ်ဂေါဝ်နှင့် ရွှေလီမြို့များတွင်လည်း လေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အိမ်အမိုး ကွာကျခြင်းများရှိခဲ့ပြီး အချို့နေရာများတွင် ရေနှင့်လျှပ်စစ်မီးများပြတ်တောက်လျှက်ရှိသည်။
လေပြင်းတိုက်ခတ်အပြီး ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် သျှမ်းပြည်(မြောက်ပိုင်း)၌ မြေငလျှင်လှုပ်မည်ဆိုသောကောဠာဟာဠ သတင်းဆက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာသဖြင့် မူစယ်မြို့ ဒေသခံများအကြား စိုးရိမ်မှုများဖြစ်ပေါ် လျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ခေတ်မှီတိုးတက်မှုတွေ ရှိ တဲ့ နေပြည်တော် ဆေးရုံကြီးကဆရာဝန်မကြီးတဦး နမ့်ခမ်းဆေးရုံကိုပြောင်းရွေ့ပြီး မွေးလူနာခွဲ့စိတ်မွေးရာမိခင်ရောခလေးပါအသက်ဆုံးရှုံး
နမ့်ခမ်းဆေးရုံ စတင်တည်ထောင်သူ အမေရိကန်သား Dr. Seagrave (http://cbi-theater-1.home.comcast.net)
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့သို့ ဆေးရုံအုပ်အဖြစ်ပြောင်းလာသူ နေပြည်တော်မှ ဆရာဝန်မကြီး ခွဲစိတ်ပေး သည့် မွေးလူနာမှာ မိခင် နှင့် ကလေး နှစ်ယောက်စလုံးသေဆုံးသွားသည် ဟု စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။
“၉ ရက်နေ့မှာခွဲစိတ်တယ်၊ ၁၀ ရက်နေ့မှာအမေဖြစ်သူသေတယ်။ နောက်တရက်တော့ကလေးထပ်သေတယ်”- ဟု အမည်မဖေါ်လိုသည့် ၎င်းမိသားစုအသိုင်းအ၀ိုင်းတဦးကပြောသည်။
ဧပြီ ၉ ရက်နေ့က နမ့်ခမ်းမြို့ ရပ်ကွက် (၁) အောင်မေတ္တာနေ စိုင်းအိုက်ဝင်း၏ဇနီး နန်းခမ်းခင် အသက် ၃၅ နှစ် မှာ နမ့်ခမ်းဆေးရုံ၌ မွေးလူနာအဖြစ် တက်ရောက် ခွဲစိတ်မီးဖွားခဲ့ရာ နေပြည်တော်မှ ပြောင်းလာသည့် ဆရာဝန် မကြီး ဒေါ်ခင်အုန်းကြည် အသက် ၅၀ ကျော်က ကိုယ်တိုင် ခွဲစိတ်ပေးခဲ့သော်လည်း ရက်ပိုင်း၌သာ ကလေးရော မိခင်ပါသေဆုံး သွားခဲ့ရကြောင်း - သိရပါသည်။
“ဆရာဝန်မ ဒေါ်ခင်အုန်းကြည်က ဧပြီ ၈ ရက်နေ့က ဘဲ နေပြည်တော်ကနေ ပြောင်းလာတာ။ ဘယ်လူနာမဆို ခွဲစိတ်ကုသရင် ကျပ်ငွေ ၅ သောင်း အရင်ပေးအပ်ရမယ်။ သူကိုယ်တိုင်မခွဲပေးတာတောင်မှ ကျပ် ၂ သောင်းကသူ့ကို ပေးရမယ်။ မရရင် ခွဲစိတ်ခွင့်လက်မှတ်ထိုးပေးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ရောက်ရောက်ချင်းမှာဘဲ ပြောတယ်”- ဟု ဆေးရုံ အသိုင်းအ၀ိုင်းတဦးက ပြော၏။
သေဆုံးသွားသည့်မွေးလူနာ နန်းခမ်းခင်အား ဆေးရုံအုပ် ဒေါ်ခင်အုန်းကြည် နှင့် အတူ ဒေါက်တာရဲမြင့်က ကူညီခွဲ ပေးသည်ဟု ဆိုပါသည်။
“ခမ်းခင်သေတာ သူ့လက်ချက်ဘဲ၊ ကောင်းကောင်းခွဲစိပ်ကုသ မပေးလို့ပေါ့၊ သူပြောတဲ့အတိုင်း ပိုက်ဆံကျပ် ၅ သောင်း လဲ ကြိုတင်ပေးချေပြီးပြီဘဲ၊ အခုခေတ် ကလေးမွေးလို့ သေတယ်ဆိုတာ ရှာမှရှားဘဲ ၊ အခု ဆရာဝန် ကညံ့လို့ လူနာ သေရတာ ” - အောင်မေတ္တာရပ်ကွက်သားက ပြောပါသည်။
ယခု လူနာသေဆုံးသွားရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ ဆရာဝန်က လူနာအသက်ထက် ပိုက်ဆံကိုပိုတန်ဖိုးထားခြင်း၊ ခေတ်မှီအသုံးအဆောင်မရှိခြင်း၊ လုပ်ငန်းအပေါ် အလေးမထားခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ/ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာြုပစုစောင့် ရှောက်မှု အားနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု နမ့်ခမ်းမြို့ခံတဦးက ဤကဲ့သို့သုံးသပ်ပြပါသည်။
“ဆရာဝန်ဆိုတာ လူနာအပေါ် စေတနာထားရမယ်၊ ၀ါသနာ နဲ့ အတူ အနစ်နာခံရမယ်။ နာသုံးနာပေါ့ဗျာ၊ အခုဟာက ဒီလိုမှ မဟုတ်တာ၊ တခြားအစိတ်အပိုင်း သွားခွဲစိတ်မိလဲ ဘယ်သူကသိမှာလဲ”
နမ့်ခမ်းမြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံသည် အင်္ဂလိပ်ခေတ်က ဒေါက်တာစီးဂရေ့ဖ်Dr. Seagrave ဆေးရုံဟု ထင်ရှားပြီး မဆလ ခေတ်ဦးပိုင်း အထိ သျှမ်းပြည်တွင် အကောင်းဆုံးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ဆေးရုံတခုဖြစ်သည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, April 21, 2010
ဂျာနယ်တိုက်များသို့ စာပေစိစစ်ရေးမှ ဗုံးပေါက်ကွဲသတင်း တင်ချင်ပါစာမျက်နှာတိုးချဲ့ပြီးဖော်ပြခွင့်ပြုကြောင်းပြောဆို
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တွင် အကြမ်းဖက် မူဝါဒ မရှိ၊ ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် ထုတ်ဖော်ပြောဆို
အဲသည်အချက်တွေကြောင့် ဆရာဦးဝင်းတင်ကို အဆိုပါ အရေးအခင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၎င်းရဲ့သဘောထားကို မေးမြန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာဦးဝင်းတင်က ပြန်လည်ဖြေကြားရာမှာ -
“အင်န်အယ်ဒီပါတီမှာ အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းလုပ်ရပ်တွေအတွက် အစဉ်အလာ မရှိဘူး။ အခုတလောက မီဒီယာတွေက မေးလာတဲ့အခါမှာပြောခဲ့တဲ့ အချက်တွေပဲ ပြန်ပြီး ပြောပြပါ့မယ်။ အင်န်အယ်ဒီမှာ အခုလိုမျိုး အကြမ်းဖက်သမားတွေ မရှိဘူး။ ပါတီရဲ့ မူဝါဒမှာလည်းလဲ အကြမ်းဖက်ရေး မပါဝင်ဘူး။ ပါတီအဖြစ် ရပ်တည်နေစဉ်မှာကော၊ ပါတီတရပ် မဟုတ်တော့သည့်နောက်ပိုင်းမှာကော - “အင်န်အယ်ဒီ” ဆိုတာ အကြမ်းဖက်လမ်းစဉ်ကို မကိုင်စွဲဘူးလို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အပြစ်မဲ့တဲ့ ပြည်သူတွေ ထိခိုက်သေဆုံးရတာအတွက်လည်း ၀မ်နည်းရပါတယ်။ အများပြည်သူတွေနဲ့အတူ စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရပါတယ်။
နောက်အရေးကြီးတဲ့ အချက်ကတော့ - လက်ရှိစစ်အစိုးရမှာ အများပြည်သူရဲ့ လုံခြုံရေးကို စောင့်ရှောက်ဖို့၊ ကာကွယ်ဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့ တရားမျှတတဲ့ ဥပဒေနဲအညီ ဆောင်ရွက်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည်လိုအချိန်မှာ ပြည်တွင်း ပြည်ပကို အရမ်းကာရော စွတ်စွဲတာတွေ၊ လက်ညှိူးထိုးနေတာတွေ လုပ်နေဖို့ မလိုဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ အင်န်အယ်ဒီကို တရားဝင် စွတ်စွဲလာရင်တော့ အင်န်အယ်ဒီကလည်း တရားဝင် ပြန်လည် ဖြေရှင်းချက် ထုတ်ပြန်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ခုချိန်မှာတော့ ကျနော့်သဘောထားကတော့ သည်လောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်”
၎င်းနောက် ကွယ်လွန်သူ စာရေးဆရာကြီးလင်းယုန်မောင်မောင်ရဲ့ သားဖြစ်သူ သားကြီးမောင်ဇေယျနဲ့ မြေးဖြစ်သူ စည်သူဇေယျတို့ သားအဖနှစ်ဦးကို စစ်အစိုးရ က အကြောင်းတစုံတရာ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ မိသားစုများထံ ပြန်ကြားခြင်း မရှိဘဲ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသည့်အပေါ်မှာ ၎င်းသဘောထားကို ပြောကြားရာမှာ -
“ဟုတ်တယ်။ ကျနော်ကြားတယ်။ စာရေးဆရာလင်းယုန်မောင်မောင်ရဲ့ သားနဲ့ မြေးကို ဖမ်းသွားကြတယ်တဲ့။ ကျနော့်အမြင်ကတော့ သူတို့တွေက စာပေသမားတွေ၊ မီဒီယာတို့ ဓာတ်ပုံတို့ လုပ်ကြတယ်။ သင်္ကြန်တွင်းမှာလည်း အများနဲ့အတူ သူတို့လုပ်စရာ သူတို့ ပုံမှန်လုပ်နေကြတာ ဖြစ်တယ်။ အဲသည်မှာ ဗုံးပေါက်တဲ့ဆီမှာ သားကို ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ဆိုပြီး ဖမ်းတယ်။ ပြီးတော့ အဖေကို နောက်တရက် အိမ်မှာသွားပြီး ဖမ်းတယ်ဆိုတာကတော့ အလွန်စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်ပါပဲ။ စာပေနဲ့ စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ စာပေအသိုင်းအ၀ိုင်းတခုလုံးအတွက် စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည်လိုပဲ ပြောချင်ပါတယ်”
ဆရာက လက်ရှိ အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြိး လောလောဆယ် လုပ်ကိုင်နေသည်များအပေါ် အနည်းငယ် ရှင်းပြပေးဖို့ ပြောတဲ့ဆီမှာ ဆရာက အောက်ပါအတိုင်း ပြောကြားပါတယ်။
“အခုချိန်မှာ အစုအဖွဲ့တွေကော၊ မိတ်ဆွေတွေ၊ ဘက်ဂရောင်းမျိုးစုံက သူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံစကားပြောနေရတာတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ အခုအချိန်မှာ ပြောနေရတဲ့ ကိစ္စတခုက လက်ရှိအခြေအနေမှာ ကျနော်တို့က လမ်းမမှားဘူး။ လမ်းမှားကိုလိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို ပြောပြရတယ်။ လမ်းမှန်လား မမှန်လားတော့ ကျနော်တဦးတည်းအနေနဲ့တော့ မပြောတတ်ပေမယ့် လူထုကို မျက်နှာမူတဲ့ နိုင်ငံရေးနောက်ကိုသာ လိုက်လို့ကတော့ ကျနော်တို့ လမ်းမပျောက်ဘူး ဆိုတာ သေချာတယ် ဆိုတာကို ပြောနေရတယ်။ နောက်ပြီးတော့လည်း လက်ရှိအခြေအနေမှာ တောလမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခြုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ် လမ်းဆက်လျောက်နေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သံသယသားကောင်အဖြစ်ခံပြီးတော့ သစ်ပင်ကြီးအောက်မှာ ထိုင်နားနေတာမျိုး ကျနော့်အနေနဲ့ မဖြစ်ချင်ဘူး။ လမ်းမှန်ဆိုတာကတော့ အားလုံး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ ၀ိုင်းပြီးတော့ ဦးတည်သွားကြရမှာ ဖြစ်မယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်”
အတိုက်အခံပါတီကြီးဟာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့ အာဏာရှင်တွေ ဟာ တော်တော်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ကို မထုတ်ပြန်ပေးဘဲ နောက်ဆုံးမှာ မလွှဲသာလို့ ထုတ်ပြန်လိုက်ရပြီးနောက် ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ အာဏာလွှဲမပေးလောက်သေးဘူး၊ နောက် ထပ်ရွေးကောက်ပွဲသစ် လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီး ရွေးကောက်ပွဲထပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အာဏာရှင်ကြီး ဟာ ရွေးကောက်ပွဲအသစ်မှာတော့ သေချာပေါက်အနိုင်ရအောင် အဖက်ဖက်ကပြင်ဆင်ခဲ့ပါ တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲသစ် အကြိုကာလမှာ အတိုက်အခံပါတီကြီးကို လည်း အမျိုးမျိုးနှိပ်ကွပ် ညစ်ပတ်အကြမ်းဖက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အတိုက်အခံပါတီကြီးဟာ နောက်ဆုံးမှာ ရွေး ကောက်ပွဲသစ်ကို မ ဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရပါတော့တယ်။ အတိုက်အခံမရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အာဏာရှင်ကြီးဟာ မဲ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်နဲ့ အနိုင်ရသွားပါတော့တယ်။ အတိုက်အခံ ပါတီကြီးဟာ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်လိုက်တဲ့အတွက် နောက်ဆုံးနေ့များ ရောက်သွားပြီ၊ နိဂုံးချုပ် သွားပြီလို့ အာဏာရှင် အောက်ဆွဲတွေက ဝမ်းသာအားရ လက်ခမောင်းခတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီပါတီကြီးဟာ မိမိ မူလရပ်တည်ချက်ပေါ်မှာပဲ ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆက်လက်တိုက်ပွဲ ဝင်ခဲ့တဲ့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲသစ်ပြီးလို့ ၃ လအကြာမှာ အာဏာခွဲဝေရေးစာချုပ် ချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး နောက်ထပ် ၆ လ အကြာမှာတော့ အာဏာရပါတီနဲ့ အတိုက်အခံပါတီတို့ရဲ့ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး (ညွန့်ပေါင်း) အစိုးရကို အောင်မြင်စွာဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒီမိုကရေစီလမ်း ကြောင်းပေါ်စတင်ခြေချနိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်။
အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းဟာ အာဖရိကတိုက်က ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံမှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က တကယ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အတိုက်အခံ အမ်ဒီစီပါတီ ခေါင်းဆောင် စဗန်ဂီရိုင် က အာဏာရှင် မူဂါဘီကို ၂၀၀၈ မတ် ၂၉ ရက် ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့ မူဂါဘီ က မဲလိမ်ပြီး အမ်ဒီ စီပါတီဟာ မဲ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်မရလို့ဆိုကာ ဒုတိယအချီရွေးကောက်ပွဲကို ၂၀၀၈ ခု ဇွန် ၂၇ ရက်မှာ ပြန်လုပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ (တ ကယ်တော့ စဗန်ဂီရိုင် ဟာ မဲ ၅၁ သို့မဟုတ် ၆၇ ရာခိုင်နှုန်းရခဲ့ပေမဲ့ မူဂါဘီက ကလိမ်ကညစ်လုပ်ပြီး အတိုက်အခံက ၄၇.၉ ရာခိုင်နှုန်း၊ မူဂါဘီ က ၄၃.၂ ရာခိုင်နှုန်းရတယ်လို့ ရွေးကောက် ပွဲပြီးတလအကြာ မေလ ၂ ရက်နေ့ကျမှ တရားဝင် ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။)
အဲဒီပထမရွေးကောက်ပွဲပြီးတော့ အတိုက်အခံပါတီဌာနချုပ်ကို ဝင်စီးနင်းပြီး ရုံးချုပ်မှာရှိနေသူ အားလုံးကို ဖမ်းသွားတာ၊ လွှတ်တော်အ မတ်တွေအပါအဝင် ပါတီဝင်တွေကို ဖမ်းတာ ရိုက် နှက်တာ သတ်ဖြတ်တာ (ပထမရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ဒုတိယရွေးကောက်ပွဲကြားမှာ အတိုက်အခံ ပါတီဝင် အနည်းဆုံး ၄၃ ယောက် အသတ်ခံခဲ့ရပါတယ်)၊ ရပ်ထဲရွာထဲ လျှို့ဝှက်ဗုံးခွဲတာတွေ၊ အတိုက်အခံကို မဲပေးခဲ့တဲ့ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူလူထုတွေ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုငယ်တွေကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာ ခြိမ်းခြောက်အကြပ်ကိုင်တာတွေ အကြီးအကျယ် လုပ်ခဲ့တာကြောင့် ဇွန် ၂၂ ရက်မှာ စဗန်ဂီရိုင်ရဲ့ အမ်ဒီစီပါတီက ရွေးကောက်ပွဲမဝင်ဖို့ သမိုင်းဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချလိုက်ပါတယ်။ ဒီ လိုနဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ အာဏာရှင် မူဂါဘီဟာ ပြိုင်ဘက် မရှိဘဲ မဲဆန္ဒ၈၅.၅ရာခိုင်နှုန်းရပြီး နိုင်သွားပါတော့တယ်။
နိုင်ငံတကာပိုင်းမှာတော့ ကုလသမဂ္ဂမှာ တရုတ် နဲ့ ရုရှား တို့က ဗီတိုအာဏာသုံး ကာကွယ်ပေးပေမဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေက ပြင်းထန်ထိ ရောက်တဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေချနိုင်ခဲ့ပြီး အဓိက ထောက်ခံပေးနေတဲ့ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံကိုယ်၌က အင်တင်တင်ဖြစ်လာ၊ (အာဖရိ ကတိုက်ရဲ့ အာဆီယံဖြစ်တဲ့) အာဖရိကသမဂ္ဂကလည်း ဖိအားပေး၊ အဓိကနိုင်ငံခြားငွေရှာပေး နေတဲ့ စိန်တွေလည်း ရောင်းမရအောင် ပိတ်ဆို့ခံရ၊ တနိုင်ငံလုံး ကာလဝမ်းရောဂါဖြစ်တာ ကလည်း အာဏာရှင်အစိုးရ ဘယ်လိုမှထိန်းမရသလို တရုတ် ရုရှားလည်း မ ကယ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါ တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဇွန်လ ၂၇ ရက်ရွေးကောက်ပွဲမှာ မူဂါဘီ မဲ “အပြတ်အသတ်” နဲ့အနိုင်ရပြီး သမတ ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ အမ်ဒီစီပါတီက ပြင်းထန်လှတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုကို ရင်ဆိုင်ပြီး ကြံ့ခိုင်တဲ့ရပ်တည် ချက်နဲ့ တိုက်ပွဲဝင်မှုကြောင့် မူဂါဘီ နိုင်ပြီးတလမပြည့်ခင် ဇူလိုင် ၂၅ ရက်မှာ အိမ်နီးချင်း တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ ပရီတိုးရီးယားမြို့တော်မှာ အာဏာရအစိုးရနဲ့ အတိုက်အခံတွေအကြား ဒိုင်ယာလော့ စလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ တချိန်က မူဂါဘီကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့ တောင်အာဖရိက သမတ အမ်ဘီကီက ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်မှာတော့ မူဂါဘီဟာ ဆဗန်ဂီရိုင်နဲ့ အာဏာခွဲဝေရေး စာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးလိုက်ရပါတော့တယ်။ ဒီစာချုပ်အရ မူဂါဘီဟာ သမတ ရာထူးကို ဆက်ယူထားပေမဲ့ ဆဗန်ဂီရိုင်နဲ့ အမ်ဒီစီပါတီကို ဝန်ကြီးချုပ် ရာထူးနဲ့ အစိုးရဝန်ကြီးရာထူးအားလုံး ပေးလိုက်ရပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ မူဂါဘီက အမျိုးသား လုံခြုံရေးကောင်စီကို ဆက်ကိုင်ထားပြီး စစ်တပ်ကို ဆက်လက်ချုပ်ကိုင်ထားပါတယ်။ ၂၀၀၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်မှာတော့ ဆဗန်ဂီရိုင်ဟာ ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပြီး တရား ဝင် ရာထူးလက်ခံခဲ့ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာ ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံဟာ တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် ဒီမိုက ရေစီနိုင်ငံ မဖြစ်သေးပါဘူး။ မူဂါဘီနဲ့ လက်ကိုင်ဒုတ်ကြံ့ဖွတ်တွေ၊ စစ် တပ်၊ ရဲ၊ လုံထိန်းတို့ဟာ လစ်ရင်လစ်သလို အမ်ဒီစီ ပါတီနဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေအပေါ် နှိပ်စက်တာ မတရားလုပ်တာတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီကာလကနဲ့စာရင်တော့ အမ်ဒီစီပါတီအတွက် အခွင့်အလမ်း အများကြီး ရသွားပါပြီ။ နိုင်ငံအ ပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေ ရုပ်သိမ်းပြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဆဗန်ဂီရိုင် အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို အတိုင်းအတာ တခုအထိ အတော် အတန်လုပ်နိုင်လာပါတယ်။ မူဂါဘီ အနေနဲ့ အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့ ကြိုးစားနေသော်လည်း ရာ နှုန်းပြည့်လုပ်ချင်သလို လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ အတိုက်အခံ အမ်ဒီစီပါတီရဲ့ နိဂုံးလို့ မဟာပညာကျော်များ တွက်ဆခဲ့တာဟာ အာဏာလမ်းမ နိဒါန်းအစ ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတော့တယ်။
ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံဟာ ၁၉၈၀ ခုနှစ်မှာ လက်ရှိသမတမူဂါဘီ ခေါင်းဆောင်တဲ့ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးနည်း အခြေခံနဲ့ အာဏာရလာပြီး လွတ်လပ်ရေးရလာခဲ့ပါတယ်။ တချိန်က မာ့က်စ်ဝါဒ မော်စီတုံးဝါဒတွေ ကြွေးကြော်တဲ့ တော်လှန်ရေးသမားဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ အာဏာ ရလာတဲ့အခါ ဇိမ်တွေ့သွားလို့ ကုလားထိုင်ပေါ်ကမဆင်းတော့ဘဲ အတိုက်အခံတွေ တိုင်းရင်း သားလူမျိုးငယ်တွေအားလုံးကို ရက်ရက် စက်စက်နှိမ်နင်းခဲ့ပါတယ်။ (၁၉၈၂ နဲ့ ၁၉၈၅ ကြားမှာ တင် လူ ၂၀၀၀၀ ကျော် အသတ်ခံခဲ့ရတယ်။) တိုင်းပြည်ရဲ့ စည်းစိမ်ဥစ္စာအားလုံးကိုလည်း ကိုယ်ပိုင်လိုသဘောထား သုံးဖြုန်းပစ်ခဲ့တဲ့အတွက် တချိန်က အာဖရိကတိုက်မှာ အချမ်းသာ ဆုံးစာရင်းဝင်ခဲ့တဲ့ ဇင်ဘာဘွေဟာ စီးပွားရေးဒလဟောကျဆင်းပြီး ကျန်းမာရေး ပညာရေး လူမှုရေး နိုင်ငံရေး ဒုက္ခပေါင်းစုံဖိစီးလို့ အာဖရိကတိုက်ရဲ့လူမမာကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ (တနိုင် ငံလုံး ထမင်းတွေငတ် ကာလဝမ်းရောဂါတွေ ဖြစ်နေချိန်မှာ အာဏာရှင် သမတ မူဂါဘီကတော့ အာဖရိကတိုက်မှာ အခမ်းနားဆုံး နန်းတော်ကြီးဆောက်ပြီး နေခဲ့ပါတယ်။)
တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီး နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးသက်တမ်း အနှစ် ၂၀ သို့မဟုတ် မူဂါဘီ အာဏာရှင်လုပ်နေခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ လုံးလုံး ဘာမြေယာတော်လှန်ရေးမှ မလုပ်ခဲ့ဘဲ စီးပွားရေး တွေချွတ်ချုံကျလာလို့ ကျောင်းသားတွေ၊ အလုပ်သမားတွေ၊ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေ၊ တိုင်းရင်း သားလူနည်းစုတွေရဲ့ နိုင်ငံရေးမကျေနပ်မှုတွေ များသထက်များလာတဲ့ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ဝန်း ကျင်ကျမှ လူထုကိုအာရုံလွှဲဖို့ လူဖြူမြေရှင်ကြီးတွေပိုင်တဲ့ မြေယာတွေကိုသိမ်းယူ၊ မြေယာဝေ ခြမ်းရေးတွေလုပ်ပြီး တော်လှန်ရေးရဲဘော်ဟောင်းတွေ၊ ကျေးလက်လူထုတွေကို စည်းရုံးချွေး သိပ်ဖို့ လုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုက (ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀,၀၀၀ 100 billion dollar တန် သို့မဟုတ် ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ တန် ငွေစက္ကူတွေ ထုတ်ရလောက်အောင်) ရာခိုင်နှုန်း ၂၃၁ သန်း အထိတက်လာပြီး အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းက ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုရောက်လာတော့ ဘယ်လိုပဲ အလိမ်အညာမှိုင်းတွေတိုက်ပေမဲ့ ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေဟာ အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်မှုတွေ အပြင်းအထန်နှိပ် ကွပ်မှုတွေကြားကနေ ကြံ့ကြံ့ခံတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြရာက အခုနောက်ဆုံးမှာ ပြည်သူ့အစိုးရရှေ့ပြေး အာဏာခွဲဝေ ကြားဖြတ်အစိုးရအဆင့်ကို ရောက် လာပြီဖြစ်ပါတယ်။
အခုလည်း ဗမာပြည်မှာ အဲင်အယ်လ်ဒီက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မှတ်ပုံမတင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက် မှားသွားပြီ၊ ရက် ၆၀ ပြည့်ရင် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်က ပျက်ပြက်သွားတော့မယ်၊ ပါတီတခုအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်မယ့် နောက်ဆုံးနေ့တွေကို ရောက်နေပြီ လို့ စစ်ကျွန်အလံရှူးတွေ အာဏာရှင်ပွဲစားတွေက ဟောင်သံပေးနေကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အာဖရိကတိုက်က ဇင်ဘာဘွေ နိုင်ငံမှာ အခုလို ရွေးကောက်ပွဲမဝင်တာ လုံးဝမှန်သွားပြီး နောက်ဆုံးမှာ အာဏာရှင်ကလျှော့ခဲ့ရတာ သာဓကအထင်အရှား ရှိနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် အဲင်အယ်လ်ဒီ ပါတီဝင်တွေ၊ ၉၀ ခုမှာနိုင်ပြီးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ကသာ တကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင် လက်ရှိကာလဟာ အဲင်အယ်လ်ဒီရဲ့ အာဏာလမ်းဝက ပထမဆုံးနေ့များ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဦးတေဇပိုင် ထူးကုမ္ပဏီက ဥရုချောင်းတွင် ရွှေရှာသည့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိ
ကချင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်စိမ်းတွင်းဒေသရှိ ဥရုချောင်းရိုးတလျောက်တွင် ရွှေရှာခွင့်ကို ဦးတေဇ၏ ထူးကုမ္ပဏီက မကြာသေးမီလပိုင်းက ရရှိထားပြီး ယခု တရုတ်နိုင်ငံသားများက လာရောက်လုပ်ကိုင်နေသည်။
ဖားကန့်မြို့နယ်၊ တာမခံအောက်ဖက် ဟောင်ပါးကျေးရွာမှစ၍ ချင်းတွင်းမြစ်ဖျား ဟုမ္မလင်းမြို့အထိ ဥရုချောင်း တလျောက်တွင် ရွှေရှာရန်ရှိပြီး ယခု ရွှေဖောင်(၃)စီး ဟောင်ပါးကျေးရွာအနီးတွင် တပ်ဆင်ပြီးစီး၍ ရွှေစတင်ရှာ နေကြသည်ဟု ဖားကန့်ဒေသခံ တဦးက ပြောသည်။
“အဲဒီရွှေဖောင်တွေကို တစစီဖြုတ်ပြီး တရုတ်ပြည်ဘက်ကနေ ကားတွေနဲ့ သယ်လာတာ။ စုစုပေါင်း ကားအစီး (၂၀)ရှိတယ်။ ရွှေဖောင်တွေ ဘယ်လောက်ဆိုတာတော့ မသိဘူး။ လောလောဆယ်(၃)စင်း တပ်ဆင်ပြီး သွားပြီ။” ဟု ပြောသည်။
ရွှေဖောင်ဆိုသည်မှာ သံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ဖောင်နှင့်အလားသဏ္ဍာန်တူ စက်တပ် ရေယာဉ်ဖြစ်ပြီး ယာဉ်ပေါ် တွင် ရေအောက်ကြမ်းပြင်မှ သဲများကို စုတ်ယူနိုင်သည့်စက်များ၊ ဆယ်ယူရရှိသည့်သဲများထဲမှ ရွှေများကို ရှာဖွှေ သန့်စင်သည့် စက်များပါ တပါတည်း တပ်ဆင်ထားသည်။
မြစ်ဆုံဒေသနှင့် မြစ်ကြီးနားအကြား ဧရာဝတီမြစ်တလျောက် ယခင်က ရွှေဖောင်များသုံး၍ ရွှေရှာဖွှေ မှုများ ပြုလုပ်နေခဲ့ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများရှိလာ၍ မကြာ သေးမီ လပိုင်းက ပိတ်ထားခဲ့ပြီး ဥရု ချောင်းတွင်မူ ယခုလို ရွှေရှာခြင်းကို ခွင့်ပြုထားခြင်း လည်း ဖြစ်သည်ဟု ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တဦးက ပြောသည်။
“မြစ်ဆုံမှာတော့ ပိတ်ထားလိုက်ပြီ။ ဒီမှာတော့ ဥရုချောင်းသန့်ရှင်းရေးအကြောင်းပြပြီး ဦးတေဇကို လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးထားတာ။ သူက နာမည်ခံတာ။ လုပ်တာက တရုတ်တွေက လာလုပ်နေတာ။” ဟု ပြော သည်။
ရွှေရှာဖွှေရေးတွင် အသုံးပြုသည့် ပြဒါးနှင့် အက်ဆစ်များကြောင့် ရေနေ သတ္တ၀ါများကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေ သလို ရေများမှာလည်း မသန့်ရှင်းနိုင်ကြောင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့များက ဝေဖန်ထောက်ပြနေ ကြသည်။
ရင်းမြစ်.. သတင်းနှင့်မီဒီယာ ကွန်ယက်။
ကန်တော်ကြီး ဗုံးခွဲတရားခံအား(နအဖ) စစ်အစိုးရထံသို့ တာဝန်သိပြည်သူတဦးမှသက်သေအထောက်အထား ဓါတ်ပုံဖြင့် ဖေါ်ထုတ်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်။
မြန်မာ့ရိုးရာ အတာနှစ်သစ်ကူးသင်္ကြန်ပွဲတော် ကျင်းပရာ ရန်ကုန်မြို့ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ကန်တော်ကြီး ကန်ပတ်လမ်းရှိ X2O ရေကစားမဏ္ဍပ်တွင် ဗုံးခွဲခဲ့သည့် လက်သည်တရားခံအား ထိရောက်စွာ သတင်းပေးနိုင်ပါက ဆုငွေ ကျပ် (၁၀) သိန်း ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (နအဖ) မှ ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။
မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ စိတ်ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့စွာနဲ့ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွဲလျက်ရှိကြချိန်တွင် တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအား အမြဲထာဝစဉ် ဒုက္ခပေးနေသော အကြမ်းဖျက်သမားသည် ရန်ကုန်သင်္ကြန် ဗုံးခွဲမှုနောက်ကွယ်မှ လက်မည်းကြီးဖြင့် ကြိုးကိုင်ချယ်လှယ် အမိန့် ပေးကာ စီစဉ်စေခိုင်းခဲ့ရုံသာမက ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဗုံးဖေါက်ခွဲခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဤရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကြီးကို ဘယ်သူကျူးလွန်ခဲ့သလည်းဆိုတာ လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလို ထင်းနေပါပြီ။ ပြည်သူလူထုမှ အကြမ်းဘက်သမားကို အမြန်ဖေါ်ထုတ်ရန်နှင့် နောက်ကွယ်မှ အမိန့် ပေးစေခိုင်းနေသူကို ဖေါ်ထုတ်ပေးနိုင်သူအား ဆုငွေ (၁၀) သိန်း ချှီးမြှင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
သတင်းမှန်အား အထောက်အထားများနှင့်တစ်ကွ ဖေါ်ထုတ်နိုင်မည်ဆိုပါက နေပြည်တော် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးချူပ် ကျော်ဆန်းထံ တိုက်ရိုက် လိပ်မူတပ်၍ လျှို့ ဝှက်စာအဖြစ် အလျင်အမြန် ပေးပို့ အကြောင်းကြားပါရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။
နောက်ဆက်တွဲ အထူးသတင်း (အချပ်ပို) –
နေ့ စွဲ - ဧပြီလ (၁၉) ရက်နေ့ စွဲပါ နေပြည်တော် အထူးကြေညာချက် အမှတ် (၀၀၀/၀၄/၂၀၁၀) ပါ အများပြည်သူသိစေရန်အလို့ ငှာ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရ ရန်ကုန် ကန်တော်ကြီး X20 ရေကစားမဏ္ဍပ် ဗုံးခွဲခဲ့သည့် လက်သည်တရားခံအား ထိရောက်စွာ သတင်းပေးနိုင်ပါက ဆုငွေ ကျပ် (၁၀) သိန်း ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (နအဖ) ၏ ညွှန်ကြားချက်အရ တာဝန်သိ လုပ်သားပြည်သူတစ်ဦးမှ အထောက်အထား သက်သေမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများဖြင့် ပေးပို့ လာပါသဖြင့် ဗုံးဖောက်ခွဲသည့် တရားခံအား ဖေါ်ထုတ်ရရှိပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း အများပြည်သူ သိစေရန်နှင့် တည်ဆဲဥပဒေ စည်းမျည်းစည်းကမ်းများဖြင့် အရေးယူသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
(ရန်ကုန် ကန်တော်ကြီး ဗုံးခွဲတရားခံ၏ သက်သေအထောက်အထား ဓါတ်ပုံအား ကြေညာချက်အောက်တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်)။
နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (နအဖ)။
မိတ္တူသို့-
(၁) ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချူပ်။
(၂) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး၊ တရားသူကြီးချူပ်။
(၃) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာမှု အဖွဲ့ အစည်း။
(၅) နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ ချူပ်။
(၆) နစ်နေမန်း၊ နစ်နေမန်းဘလော့။
ရန်ကုန် ကန်တော်ကြီး X20 ရေကစားမဏ္ဍပ် ဗုံးခွဲခဲ့သည့် လက်သည်တရားခံပုံမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန် ကန်တော်ကြီး ဗုံးခွဲတရားခံအား သက်သေအထောက်အထား ဓါတ်ပုံအား ပေးပို့ ဖေါ်ထုတ်ပေးသူ နစ်နေမန်းအား အများပြည်သူတို့ကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။
ပြန်လည်ပေး ပို့လာသော ကိုနစ်နေမန်း အားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်.။
AAPP Press Release on Bombings .
AAPP Press Release on Bombings
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, April 20, 2010
ရန်ကုန်မြို့ သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုနှင့်ပါတ်သက်၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ)၏ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
NLD_LA Statement on Bomb Blast in Rangoon
အိုက်စလန်မီးတောင် ပြာမှုန်များကြောင့် ခရီးသည်သန်းနှင်ချီ၍ အခက်ကြုံ
ဥရောပ ယူနီယံ(EU)က အိုက်စလန်ရှိ မီးတောင်ပေါက်ကွဲရာမှ ထွက်ပေါ်လာသော မီးတောင်ပြာများကြောင့် ဥရောပလေကြောင်း သွားလာရေးကို အကြီးအကျယ် ရှုပ်ထွေးမှုများ ပေါ်ပေါက်လာစေမှုအပေါ် အရေးပေါ် ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အိုက်စလန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှ Eyjafjallajoekull မီးတောင်ကြီး ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပါတ်က ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးနောက် ကောင်းကင်တွင် မီးခိုးပြာများ ဖုံးလွှမ်းနေရာ ဥရောပ နိုင်ငံအတော်များများမှ ခရီးသည် (၆.၈)သန်းတို့သည် ဧပြီလ (၁၉)ရက်နေ့တွင် ပဉ္စမမြောက်နေ့အဖြစ် သောင်တင်နေဆဲဖြစ်သည်။ EU၏ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာန တာဝန်ရှိသူ ဆင်မ်ကားလက်စ်က မီးတောင်ပြာများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နေသော တိမ်တိုက်များ ရှင်းလင်းသွားသည်အထိ စောင့်နေရေးမှာ လက်တွေ့မကျကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုအခါ ပြင်သစ်၊ ဗြိတိန်၊ စပိန်နှင့် မြေထဲပင်လယ် နိုင်ငံအချို့ အပါအ၀င် နိုင်ငံပေါင်း (၂၀)ကျော်တို့မှာ လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ ဆိုင်းငံ့ထားလိုက်ရကြောင်း သိရသည်။ ကားလက်စ်က အချို့လေကြောင်းလိုင်းများသည် တစ်နေ့လျင် ဒေါ်လာသန်း(၂၀၀)မျှထိ နစ်နာဆုံးရှုံးနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ဆားဓာတ်ပါသော ပြာမှုန်များသည် အာတိတ်စက်ဝိုင်းမှစကာ တောင်ဖက်မြေထဲပင်လယ်ထိ ရောက်ရှိနေကြောင်း စပိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဒီယေးဂိုးလိုပက်ဇ် ဂါရီဒိုက ပြောကြားခဲ့သည်။
ကောင်းကင်ပြင်ကို ပိတ်ဖုံးနေသော မီးတောင်ပြာ တိမ်တိုက်များကြောင့် ရေကြောင်းသွားလာရေးတွင်လည်း အခက်အခဲများ ကြုံနေရပြီး ဗြိတိသျှ တော်ဝင်ရေတပ်သည် ပင်လယ်ထဲတွင် လမ်းကြောင်းပျောက်နေသော သင်္ဘောများအား ကူညီလမ်းပြပေးနေရကြောင်း သိရသည်။
ဧပြီလ(၁၄)ရက် မီးတောင်စတင် ပေါက်ကွဲသည့်နေ့တွင်ပင် ဗြိတိန်မှ လေယာဉ်ခရီးစဉ် (၆၃)ခုအား ဖျက်သိမ်းလိုက်ရသည်။ အနည်းဆုံး လေဆိပ်(၃၁၃)ခုတွင် ခရီးစဉ်များ ရွှေ့ဆိုင်းနေရပြီး ခရီးသည် (၆.၈)သန်းမျှ သောင်တင်နေသော အခြေအနေအတွက် EUခေါင်းဆောင်များကြား အလေးထား ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ၀န်ကြီးချုပ် ဂါရီဒိုက ပြောကြားခဲ့သည်။ မီးတောင်ပြာများကြောင့် ဥရောပဒေသရှိ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများအတွက်လည်း စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်နေကြောင်း လေ့လာသူများက သုံးသပ်ထားကြသည်။
ပေးပို့လာသူ့ Burma Paparazi အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Tuesday, April 20, 2010
အဲပုဂံပိုင်ရှင် တေဇရဲ့ နအဖသတင်းစာပါအလှူငွေနဲ့ အဲပုဂံပိုင်ရှင်တေဇသားများနှင့်အပေါင်းအပါတို့ရဲ့ ထင်တိုင်းကျဲနေကျသောဓာတ်ပုံများ
နအဖရဲ့ဒီနေ့ ထုတ် ၀ါဒဖြန့် ချီရေးသတင်းစာထဲမှာ နအဖမှ မဟုတ် တေဇကလည်း သူရဲ့အဲ့ပုဂံအတွက်ပါ ကြော်ညာထိုးတတ်တာဘဲ။ တေဇရဲ့အပေါင်းအပါ ဇော်ဝင်းထွဋ်တို့ ကအစ နအဖကို ဖားတတ် တေဖအလိုကျ လိုက်လုပ်ပေးတတ်ကြတာဘဲ။
သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ရန်ကုန် ကန်တော်ကြီး ဗုံးပေါက်ကွဲမှုမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလို့ဆေးကုသခံယူနေတဲ့သူတွေအတွက် တေဇရဲ့Air Pagan အဲပုဂံကလေကြောင်းလိုင်းကနေ အလှူငွေ မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်းတစ်ရာကျော် လှူဒါန်းပါသတဲ့။ လှူတဲ့ငွေက တေဇရဲ့ သားတွေ စီးတဲ့ကားရဲ့ဘီးတစ်ဘီးစာတောင် မရှိပါဖူး။ ဒီငွေလောက်ကို အလှူပြပြီး အဲ့ပုဂံကို ကြော်ညာထိုးတာ နအဖကို ဖားပြတာတွေကတော့ မသိတဲ့သူတွေအတွက်တော့ သတင်းစာဖတ်ပြီး သာဓုတွေ ခေါ်မိရင် ပြန်တောင်ရုတ်သိမ်းဖို့ ကောင်းနေပါပြီ။
တကယ်ဘဲ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရကြတဲ့သူတွေကို တေဇတို့အဲပုဂံက ကိုယ်ချင်းစာ သနားတယ်ဆိုတာ ယုံစရာအကြောင်း မရှိပါဖူး။ ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ တေဇရဲ့အဲပုဂံသင်္ကြန်မဏ္ဍပ်မှာ ပျော်ပါးကဲနေကြတာ နည်းနည်းလေးတောင် အပျော်မပျက်ပါဖူး။ အထူးသဖြင့် တေဇရဲ့သားတွေနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေ အဲပုဂံကသူတွေ ဗုံးပေါက်တာ သံဗုံးပေါက်တာလောက်တောင် အရေးမထားဘဲ ကဲနေကြတာ နအဖသတင်းစာထဲ မပါပါလား။
တေဇရဲ့အဲပုဂံသင်္ကြန်မဏ္ဍပ်ဟာ သန်းရွှေရဲ့ မြေး နေရွှေသွေးအောင် သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်ထက် ပိုကြီးပါတယ်။ နေရွှေသွေးအောင်ရဲ့သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်က အမှန်တကယ်မှာ ပေ ၁၀၀ လောက်သာ ကျယ်ပေမယ့် တေဇတို့ ရဲ့အဲပုဂံသင်္ကြန်မဏ္ဍပ်က ပေ (၁၂၀) ခန့်ကျယ်ပါတယ်။ ဒါကို နေရွှေးသွေးအောင် မဏ္ဍပ်ကြီးတာကို အလေးပေးဖေါ်ပြပေးနေကြတာ။ တေဇရဲ့အဲပုဂံမဏ္ဍပ်ကို သိန်း (၅၀၀) လောက် အကုန်ကျခံပြီး ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ကန်တော်ကြီး ဗုံးပေါက်လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေအတွက် နအဖသတင်းစာထဲ ခမ်းခမ်းနားနား ဖေါ်ပြရလောက်အောင် လှူလိုက်တဲ့ ငွေက မပြောပလောက်ဖူးဆိုတာ နှိုင်းယှဉ်မြင်နိုင်ပါတယ်။
တေဇရဲ့သားတွေနဲ့အပေါင်းအပါတွေ၊ အဲပုဂံကသူတွေ ကိုယ်ချင်းစာဖို့ နေနေသာ ဘယ်လောက်တောင် ပျော်ပါးကဲနေကြလည်း၊ အရက်တွေတင်မက မူးယစ်ဆေးဝါးတွေပါ သောက်စားမူးယစ်နေပြီး အမူးလွန်နေကြလည်းဆိုတာ အခုဖေါ်ပြမယ့် သူတို့ ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေက သက်သေပြနေပါတယ်။
တေဇမပြောနဲ့တေဇရဲ့ သားတွေ မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်လောက်တောင် အခွင့်ထူးခံတွေ ဖြစ်နေကြသလည်း၊ ဘယ်လောက်တောင် ထင်ရာစိုင်းကဲနေကြသလည်း၊ တိုင်းပြည်ရဲ့သယံဇာတတွေ အဆောက်အဦးတွေ လုပ်ငန်းတွေကို နိုင်ငံပိုင်ကနေ သူတို့ ပိုင်လုပ်ပြီး ရနေတဲ့ ငွေတွေကို အပျော်အပါးတွေအတွက် ဖြုန်းသုံးနေလည်းဆိုတာ ကြည့်သာကြည့်ပါတော့။ သောက်စားမူးယစ်ပြီး မိုက်ရိုင်းနေတဲ့ ရိုင်းစိုင်းနေတဲ့ အပြုအမူတွေကို မြင်ပါလိမ့်မယ်။
တေဇရဲ့သားတွေ ပျက်စီးရမ်းကားနေတာကို ကြည့်ရင် အဖေဖြစ်သူ တေဇဆို ပြောဖွယ်ရာ မရှိတော့ဖူး။ သန်းရွှေရဲ့အထူးအခွင့်အရေးရသူ ဖြစ်နေတာ။ တေဇရဲ့ သားတွေ လတ်တစ်လော အတူပျော်ပါးနေတဲ့ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကတော့ သြစတြေလျနိုင်ငံသူ နှစ်ဦး ဘာညာလေးတွေဖြစ်ကြောင်း တေဇသားတွေရဲ့အတွင်းသိတွေက ထုတ်ဖေါ်ပြောပြလာပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ သန်းရွှေတို့ ရဲ့သားသမီးမြေးတွေ၊ နအဖဗိုလ်ချူပ်ကြီးများရဲ့ သားသမီးမြေးတွေ၊ တေဇတို့ လို လူမျိုးတွေရဲ့သားသမီးမြေးတွေ အခုလို အခွင့်ထူးခံတွေ ဖြစ်နေကြတာကို ပြည်သူတွေက သူတို့ ကိုသာ တိုင်းပြည်ကို ဆက်လက်အုပ်ချူပ်ခွင့်ပေးနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ …..
ပေးပို့ ပေးသော ကိုနစ်နေမန်းအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
တပ်မှုးတပ်သားပြောစကား အပိုင်း(၁) ဗိုလ်ကြီးဟောင်း ခင...
နအဖ ကအေးချမ်းသာယာပြီး ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် ...
မင်းသားဒွေး အဖေ ဦးတင်ထွန်းမောင်ကလဲ မတရားတဲ့ရွေးကေ...
X2O ရေကစားမဏ္ဍပ်တွင်ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ကြောင့်ပြင်းထန်စွ...
ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်၂၃ လမ်းတွင် လေးထပ်တိုက်ငြမ်းပြ...
သင်္ကြန်ဗုံးပေါက်ကွဲမှု အဓိကတာဝန်ရှိသူ နအဖစစ်အစိုးရ ဟ...
ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ပေမဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချု...
ရွှေတိဂုံစေတီပေါ်သို့ အေးချမ်းစွာ ဘုရားဖူးလာကြသော ပြ...
ယောနယ်တွင် နွေရာသီသွားလာရေးအတွက် ကိုယ့်အားကိုယ်ကို...
ရွှေဘိုအောင်မြေ၀င်း မန်ကျည်းပင်စည်မှ စေတီပုံနှင့်ထူ...
ဧပြီ(၂၀) ရက်နေ့ မူဆယ် တွင်လေပြင်းမုန်းတိုင်းတိုက်ခ...
ခေတ်မှီတိုးတက်မှုတွေ ရှိ တဲ့ နေပြည်တော် ဆေးရုံကြီးက...
ဂျာနယ်တိုက်များသို့ စာပေစိစစ်ရေးမှ ဗုံးပေါက်ကွဲသတင...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တွင် အကြမ်းဖက် မူဝါဒ ...
ဦးတေဇပိုင် ထူးကုမ္ပဏီက ဥရုချောင်းတွင် ရွှေရှာသည့်လု...
ကန်တော်ကြီး ဗုံးခွဲတရားခံအား(နအဖ) စစ်အစိုးရထံသို့ ...
ရန်ကုန်မြို့ သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုနှင့်ပါ...
အိုက်စလန်မီးတောင် ပြာမှုန်များကြောင့် ခရီးသည်သန်းနှ...
အဲပုဂံပိုင်ရှင် တေဇရဲ့ နအဖသတင်းစာပါအလှူငွေနဲ့ အဲပ...
ကန်တော်ကြီး X2O မဏ္ဍပ် ဗုံးကွဲ ဒဏ်ရာရသူ ၁၇၀ ဦးထဲတွင...
ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုပွဲ ကို ...
မြစ်ရေ တိုက်စားမှုကြောင့် ပြိုကျပျက်စီးနေသော ကစင်+ေ...
အမျိုးသမီးများအပေါ် ကျူးလွန်ထားသည့် နအဖစစ်အစိုးရ၏ ရ...
ဗုံးထိမှန်သော လူငယ်တစ်ဦး ထပ်မံသေဆုံး......
နှစ်ဆန်း(၁) ရက်နေ့ မှာ အမျိုသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချု...
ကန့်ဘလူမြို့နယ် သစ်တောကြိုးဝိုင်းအတွင်းမှ တောင်သူမ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွ...
မြန်မာနှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)...
အတာသင်္ကြန် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် သေဆုံးခဲ့သူ...
နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ ငါးအကောင်ရေ ( ၂၀၁၀ ) ဇီဝိတဒါန ငါ...
မြန်မာအတာသင်္ကြန် အကြတ်နေ့ x2o မဏ္ဍပ်ဗုံးပေါက်ကွဲ သော ...
မြန်မာအတာသင်္ကြန် အကြတ်နေ့ x2oမဏ္ဍပ်တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမ...
နွေမှာပိတောက် ရင်မှာခမောက်ဆိုတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ရင်ထ...